Wararka Maanta: Sabti, Oct 6 , 2012-Kulan Xildhibaannada Baarlamaanka Somalia iyo Odayaasha dhaqanka ku dhexmaray Xarunta Golaha Shacabka
Kulanka oo ka dhacay xarunta golaha shacabka ee Muqdisho ayaa waxaa ka qayb-galay 200 oo xildhibaan iyo 135-ka oday dhaqameed oo soo xulay xildhibaannada, waxaana kulankaas oo fikrado kala duwan la isku dhaaf-saday shir guddoon ka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka, Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Odayaasha dhaqaanka ayaa waxay xildhibaannada kula taliyeen inay howlahooda u gutaan si daacadnimo ay ku jirto, iyagoo sidoo kalena ugu baaqay inay xoojiyaan howlaha dib loogu dhisayo hay'adaha kala duwan ee dowladda si dalka uu u gaaro hannaan dowladeed oo dhameystiran.
"Xildhibaannada waxaan ugu baaqaynaa inay foojignaadaan wax walba oo ku keeni kara howlahooda habacsanaan, waana inaad noqotaan kuwo sharciga ku dhaqma oo aan ka leexan," ayay yiraahdeen odayaashii dhaqanka ee kulanka ka qaybgalay.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Prof. Jawaari oo isaguna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in baarlamaanku uu qaadanayo dhammaan talooyinka ay u soo-jeediyeen odayaasha dhaqanka, isagoo hoosta ka xariiqay in baarlamaanku uu ku shaqeyn doono rabitaanka shacabka.
Kulankii oo saacado badan qaatay ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo dhexmarta xildhibaannada baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka ee soo xulay, waxaana uu imaanayaa iyadoo baarlamaanka ay dhawaanahan wadeen kulammo ay wadatashi ah oo ay la yeelanayaan waxgaradka si ay howlahooda u noqdaan kuwo cad oo aan mugdi ku jirin.